मोटोपन घटाएकी यी मोडल जो १०८ बाट ६३ किलोमा आइन् ! - Khabar Break | Khabar Break
मोटोपन घटाएकी यी मोडल जो १०८ बाट ६३ किलोमा आइन् !
ग्ल्यामर दुनियाँ, जहाँ सुन्दरता नै करियर बन्छ । त्यसैले आफ्नो सुन्दरता र शरीरको ख्याल राख्नु सबैका लागि जरुरी हुन्छ। यति मात्रै होइन, मोडलिङको दुनियाँमा अहिले मोटो मान्छे पनि मोडल हुने प्रचलन छ अचेल। मोटो मान्छेका लागि लुगाको बिज्ञापन गर्दा पातलाको के कामर ? त्यसैले यस्तै मान्छेलाई मोडलका रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
एक्सरसाइज त केही समय कडा गर्नैपर्यो, उनी भन्छिन्, ‘जुम्बा एक प्रकारको एरोबिक्स डान्स हो। जहाँ संगीतसँगै नाँचिन्छ। असिनपसिन भएपनि रमाइलो लाग्छ र नाँच्न मन लागिरहन्छ। त्यसैले सुरुमा एक्सरसाइज गर्ने बानी पार्न यसले सघायो।’
उनले मोटोपन घटाएपछि मीठाई, सोडा र धेरै कार्बोहाइड्रयुक्त खानेकुरा खान छाडेकी छिन्। उनको वजन घटाउने एउटा सजिलो टिप्स छ, ‘जति भोक लागेपनि अलि घटाएर खानुहोस्। विस्तारै कम खाने बानी पर्छ। जुन स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो।’